UPDATE: Wararkii ugu dambeeyay qarax khasaare geystay oo ka dhacay isgoyska Zoobe ee Muqdisho | HalQaran.com
Home Wararka Maanta UPDATE: Wararkii ugu dambeeyay qarax khasaare geystay oo ka dhacay isgoyska Zoobe...
UPDATE: Wararkii ugu dambeeyay qarax khasaare geystay oo ka dhacay isgoyska Zoobe ee Muqdisho
Muqdisho (Halqaran.com) – Waxaa faah-faahin dheeraad ah ka soo baxaya qarax gaari ku xirnaa oo maanta ka dhacay Magaaladda Muqdisho.
Qaraxaan ayaa ka dhacay Isgoyska Zoobe ee Magaalada Muqdisho, waxaana gaariga qarxay Saarnaa Xubno Turki ah.
Ilo kamid ah hay’adaha amaanka ayaa u sheegay warbaahinta Gudaha in Gaarigaasi ay wateen shaqaale kamid ah kuwa dhismaha kawada Waddada Muqdisho iyo Afgooye oo ay waddo shirikadd laga leeyahay dalka Turkiga.
Inta la xaqiijiyay waxaa qaraxa uu dhaawac kasoo gaaray laba ruux oo shacab ah oo wadada marayay.
Maalmo ka hor ayeey aheyd markii qarax miino lala eegtay Gaari ay wateen xubno Injineero Turki ah oo ku hawlanaay dhismaha wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye qaraxaasi oo ka dhacay meel ku dhaw xarunta deegaanka Garasbaaley.
Qarax Isgoyska Zoobe